पूर्ण शाकाहारी हुनु शरीरका लागि घातक - AJAMBARI
पूर्ण शाकाहारी हुनु शरीरका लागि घातक
४ जेठ,२०७५ 194 0
चिकित्सककहाँ पुग्नुभयो भने, तपाईंको मेनुबाट थुप्रैथरी खानेकुरा कटौती हुनेछ । त्यसमा खसीको मासु, बोइलर कुखुरा पनि हुनसक्छ । चिल्लो, पिरो, अमिलो त छँदैछ ।
३. भिटामिन बी १२
तपाईले क्रिस्पहरु र बटर राखिएको रोटी पाउनुहुन्छ जुन अस्वस्थ हुनसक्छ । त्यसैगरि तपाईले लामो यात्रा गर्दा धेरै थरि खानेकुरा पाउनुहुन्न र पाइहाल्नुभयो भने पनि मासुजन्य पदार्थ भन्दा स्वस्थ खालको खानेकुरा पाउनुहुन्न ।
विश्वका हाइ-पेड सिइओ: कतिसम्म तलब पाउँछन्? टपटेनमा ८ अमेरिकीसँगै दुई भारतीय
१ बैशाख,२०७५0400
६ फाल्गुन,२०७४0549
३ असार,२०७५0167